‘श्रीमतीकै उत्प्रेरणाले सरकारी जागिर भए’ – KarnaliPost Daily
‘श्रीमतीकै उत्प्रेरणाले सरकारी जागिर भए’
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ०६:४१ August 18, 2020 by Karnali Post Daily
संघर्षको उपनाम हो मिनल बुढ्थापा । नाम मिलन भएपनि ईन्टर लेवल पढ्दै गर्दा बाबाको मृत्यु भएपछि आफ्नो साहाराबाट बिछोड हुनुपर्यो । साँझ विहान खाना पकाउने र भाडा माझेरै बाल्यकाल विताएका बुढ्थापा यतिबेला नेपाल सरकारको लेखाअधिकृत जस्तो उच्च वहोदामा कार्यरत छन् । जीवन संघर्ष, लगायतका विषयमा सहकर्मी सागर परियारले तातोपानी गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत मिलन बुढ्थापा संग गरेको कुराकानीको सार ः
जीवनलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
जीवन संघर्षको उपनाम हो । यो पृथ्वीमा संघर्ष गर्नका लागि नै रहेक नागरिकले आमाको कोख बाट जन्म लिन्छन् । तर सबैको जीवन संघर्षशील नहुन पनि सक्छ । तर तनाव र अभावका बीच जीवनलाई सफल बनाउन संघर्ष गर्ने मध्य म पनि एक हुँ । धेरैले आफुलाई पृथ्वीको बोझ भनेर चित्रण गर्दछन् ।
त्यसलाई म गलत ठान्छु, जीवन धर्तीका लागि बोझ हैन् बरदान हो । सास रहुन्जेल सफलता प्राप्तीका लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ । अनि मात्र जीवनको अर्थ पत्ता लगाउन सकिन्छ । मेरो जन्म २०४५ साल भदौ ११ गते भयो । त्यसपछि संघर्ष दिन शुरु भए ।
आफ्ना कार्य अनुभव सुनाउनोस न ?
कार्य अनुभव त धेरै छैनन् । तर पहिला यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम गर्थे । जहाँ लाईसेन्स वितरण गर्ने,कार्यालयको आन्तरिक कामकाज हुन्थ्यो । अहिले तातोपानी गाउँपालिकाको लेखाअधिकृतमा कार्यरत छु ।
यहाँ कार्यालय सहयोगी देखि हाकिम सम्मको काम गर्नुपर्छ । विगतको भन्दा जिम्मेवारी बढी भएर पनि होला । अलि कार्यबोझ धेरैनै हुन्छ । असार तिर राती १२÷१ बजे सम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै छन् अनुभव गर्दै सिक्दै नागरिकको सेवा छिटो छरितो गर्ने प्रयासमा छु ।
बाल्यवस्थामा केहि लक्ष्य थिए भन्न मिल्ने ?
अबश्यक पनि, लक्ष्य थिए । २०६१ सालमा एसएलसी पास भए । त्यसपछि ओभरसियर पढ्ने ठुलो धोको थियो । तर आईकम पढियो । त्यसपछि पनि क्याम्पसतिर पढाउने, बैंकतिर जागिर गर्ने लक्ष्य राखेको थिए । बिबिएस पढ्दै गर्दा बिवाह हुन पुग्यो ।
घरको एक्लो छोरा भएकाले पनि परिस्थितीले २०६४ सालमा बिवाह गरे । भविष्यमा लक्ष्य बदलिन्छ भन्ने कल्पना थिएन् तर पछि गएर सरकारी जागिरे भए ।
त्यसो भए उत्प्रेरणको सा्रेत कसलाई भन्नुहुन्छ ?
क्याम्पस पढ्दै गर्दा लभ परेको थियो । उनीसंगै बिवाह भयो । जसले मेरो बाल्यकालको लक्ष्यलाई मोडेर सरकारी जागिरमा होमिन साथ सहयोग उत्प्रेरणा जोगाईन् । मेरी श्रीमतीको उत्प्रेरणा, आमाको मायालेनै म आज सरकारी जागिरे भएको छु । बुबा वन रक्षक थिए । जाडरक्सी बढी खाने भएकाले तलब कहिले बच्थेन् । हुँदाहुदै २०६३ सालमा बुबाको ४१ वर्षको उमेरमै मृत्यु भयो । जतिबेला म ईन्टर पढ्दै थिए । कलिलै उमेरमा विधुवा भएकी आमा मेरैे आश भरोसामा बसेर माया दिनु भयो । आमाको त्यो माया र संघर्ष झनै उर्जा दियो । त्यहि उर्जा आज म यहाँ पुगे ।
त्यसपछि २०६४ सालमा बिवाह भएपछि हामी काठमान्डौ गएका थियौ । मलाई थाहा नदिई श्रीमतीले नासु टयूसन कक्षामा फर्म भरेर पढ्न बाध्य बनाईन् । म नासु पढ्दै गर्दा श्रीमती जागिरे थिईन् । उनकै सहयोगमा पढेर परिक्षा दिँदा दुईपटक सम्म असफल भए । तर पनि श्रीमतीले हार नखान भन्दै उत्प्रेरणा र साथ दिईराखिन् ।
अन्ततः तेस्रो पटक लेखापालमा सिफारिस भए । आमाको माया र संघर्ष, श्रीमतीको साथ र उत्प्रेरणाले नै जीवन सफल भएको अनुभूति भएको छ । अहिले श्रीमती जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा नासुका रुपमा कार्यरत छन् । घरमा आमा २ छोराछोरी र अम र श्रीमती गरी ५ जनाको खुसी परिवार छ । खुसी र सफल जीवनको भागेदार श्रीमती दुर्गा स्वाँर र आमानै हुन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु “मेरो जीवनको आईडलनै आमा र श्रीमती हुन् ।”
बाल्यकाललाई कसरी सम्झीनु हुन्छ ?
मेरो बालकाल अरु भन्दा निकै फरक ढंगबाट बित्यो । घरको एक्लो छोरा बाबा, आमा र म मात्रै थियौ । बुबाको वन रक्षक जागिर थियो । आमा खेतीपाती बेस्थ हुन्थीन् । दिउँसो स्कुल जाने विहान बेलुका खाना पकाउने र भाडा धुदै मेरो बाल्यकाल बित्यो । अरु जस्तो साथी संगी संग घुम्न जाने खेल्न जाने,रमाईलो गर्ने समयनै पाईन् । घरको परिस्थितीलेनै मलाई बाल्यकालदेखि संघर्ष गर्न सिकायो, मेहनत गर्न सिकायो ।
त्यतिबेला त निकै झयाउ लाग्थ्यो । तर विगतको संघर्षलाई अहिले स्मृतीमा ताजागरी हेर्दा एक सफल व्यक्ति बन्न त्यो संघर्ष पनि निकै कम गरे जस्तो लाग्छ ।
विगतको धेरै सम्झीने पल केहि छन् ?
हरेक व्यक्तिका आफ्नै कथा कहानी हुन्छन् । जस्ता मेरो पनि छ । प्रया सम्झीने दुइवटा क्षण छन् । जुन एक रमाईलो एक दुखद । दुखद के भने, बुबाको जाडरक्सी खाने बानीले गर्दा ४१ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो । जतिबेला म ईन्टर पढ्थे । बाबाको मृत्युपछि कसरी पढ्ने कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने चिन्ताले निकै तनाब भयो ।
सानैदेखि घरको जिम्मेवारी थपियो जो पल धेरै सम्झीन्छु । त्यस्तै एक सुखद पल के भने, क्याम्पसप पढ्दै गर्दा दुर्गा स्वार नामकी केटी संग माया बसेको थियो । २०६४ साल असार ६ गतेको कुरा हो । हामी भेट्यौ, कुराकानी गर्दा गर्दै साँझ पर्यो । दिनभरी भेटेको सबैलाई थाहा भईसकेको थियो । घर धेरै टाढा भएकाले पुराउन जान सम्भव थिएन । उनलाई तत्तकाल मेरै घरमा ३÷४ घण्टा राखे । तर गाउँमा भगाएर ल्याई सकेको हल्ला चलेछ । मैले ३÷४ घण्टापछि उनलाई घरमै पुराईदिए । तर परिस्थिती प्रतिकुलन भएपछि २०६४ साल ११ गतेनै मेरो बिवाह भयो । यो पल धेरै सम्झीन्छु ।
संघियतालाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
संघियता अधिकारको हस्तान्तरण हो । केन्द्रित राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत गर्दै नागरिकको घरदैलो विकास पुराउनु अर्थात संघियताकै भाषा भन्दा गाउँगाउँमा सिंह दरबार आउनु हो । तर संघियता कार्यान्वयनका लागि राज्य आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुनुपर्दछ ।
नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशमा संघियत कार्यान्वयन निकै जटिल छ । संघियतालाई टिकाई राख्न आर्थिक समृद्धीका कुरालाई प्रथामिकता दिनु पर्दछ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
संघियतापछि धेरै उठेको प्रश्न मध्य यो पनि एक हो । कर्मचारीलाई दबाब दिने कानुन ऐन विपरित चलाउन खोज्ने । त्यस्तै जनप्रतिनिधिलाई कानुन ऐनका नाममा घुमाउने कर्मचारी भएका ठाउँ विबाद होला । तर तातोपानी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच निकै समधुर सम्बन्ध छ । सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने प्रयासमा छौ ।
केहि सन्देश दिनुहुन्छ पाठकलाई ?
हरेक सफल कर्मचारी,कलाकार,पत्रकार राजनीतिज्ञको पछि रहस्य र संघर्ष हुन्छ । आफु भन्दा शिक्षित विज्ञ, बौद्धिक व्यक्तिबाट धेरैले सिक्नु पर्दछ । मैले पनि मेरो अग्रजहरुबाट धेरै सिकेको थिए । सम्पुर्ण पाठक वर्गलाई के भन्छु भने, आफुलाई धर्तीको बरदान सम्झीनुहोस,धैर्यता,लगनशीलता राख्नुहोस । भने गलत संगत कहिले नगर्नुहोस आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीका निरन्तर जुट्नु भयो भने पक्कै सफल हुने दुईमत छैन् ।
एमालेभित्र पूर्वमाओवादी : आँधीअघिको सन्नाटा ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पार्टी वैधानिकता दावी गर्दै उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगमा कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको शल्यक्रिया कर्णालीका तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन एमालेको निर्देशन
जुम्लामा एक ४३ वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणले निधन
पार्टी वैधानिकता दावी गर्दै उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगमा
कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको शल्यक्रिया